Realme TechLife Robot Vacuum, nyocha miri emi | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | 30/06/2021 14:00 | Ngwa, General, Nyocha
Realme n'oge na-adịbeghị anya nwere oge ịhapụ ihe ijuanya, n'oge na-adịbeghị anya anyị gosiri gị ngwaọrụ ọhụụ kachasị elu n'etiti, Realme GT, nke na-atọ ọtụtụ ndị ọrụ ụtọ. N'otu oge ahụ anyị enweela ike ịhụ ọge ntị elekere. Agbanyeghị, ngwaahịa anyị wetara gị taa bụ ikekwe ihe ị na-atụghị anya ya, igwe robot agụụ.
Realme TechLife Robot Vacuum bụ mwepụta kachasị ọhụrụ nke ika ahụ, onye na-ehichapụ robot na-eju anya na arụmọrụ ya / ọnụego ya.Ọ na-enye anyị ezigbo atụmatụ? Anyị na-enyocha ihe omimi nke Realme robot igwe mkpochapu na atụmatụ ya n'ụzọ zuru ezu, chọpụta na anyị.
Dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile, anyị gụnyere video n'elu banyere anyị ọwa nke YouTube nke ị ga - enwe ike ihuchapụta ngwa ngwa nke ngwa ngwa ngwa ngwa nke Realme robot yana nhicha ya na nnwale ya. Were ohere ịdenye aha na chanel anyị YouTube ma hapụ anyị ajụjụ ọ bụla.
1 Akụrụngwa na imewe, ndị ochie anaghị ada ada
2 Tank na usoro nhicha
3 Nchaji isi, obodo kwụụrụ ya na itinye ya n'ọrụ
4 Ike mmịcha na nhicha ahụmahụ
Akụrụngwa na imewe, ndị ochie anaghị ada ada
Aha gọọmenti bụ Realme TechLife Robot agụụ, mana n'eziokwu, maka nyocha ndị ọzọ anyị ga - akpọ ya Realme robot agụụ nhicha maka akụnụba na ọgụgụ. Ejiri ngwaọrụ plastik mee ngwaọrụ a, dịka ị nwere ike ịtụ anya. Anyị na-ekwu maka nnukwu ngwaahịa, Ọ dị 35 centimeters na dayameta na 10 centimeters elu, Ọ bụghị obere kọmpat na ahịa mana n'eziokwu, oke ahụ ezuola.
Akụkụ elu nke okpueze bụ okpueze, a ugbo elu-ojii ụgbọelu qỌ ga-abụ ndọta uzuzu (ihe omume ntụrụndụ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ehichapụ robot nke m na-enweghị ike ịghọta) na bọtịnụ abụọ, otu maka isi ihe nkwụnye na bọtịnụ ON / OFF. Sober ma mara mma, ka anyị chee ya ihu, ọ dị mma ka ọ bụrụ ebe ọ bụla. E ji plastik mee ya wee mee ngụkọta ịdị arọ ya Kilogram 3,3 na mkpokọta.
En la parte dị ala karịa encontramos ogwe aka abụọ na-ehichapụ brushes nke ga-eduzi unyi gaa mpaghara absorption, «idler» wheel nke na-ahụ maka idobe ngwaọrụ ahụ n'ihu, wiil abụọ a na-atụgharị iji merie ihe mgbochi nke ihe dị ka centimita abụọ, mpaghara mmịpụta na ahịhịa agwakọta na ntakịrị anya nke tank.
Tank na usoro nhicha
Anyị chọtara nkwụnye ego nke 600 ml siri ike Maka ụdị nke na-agụnye ọchịchọ, ọ bụrụ na anyị azụta (iche) a ga-ebelata nkwụnye ego a na 350ml. NAAhịhịa ahụ na-elekọta absorption bụ agwakọta, anyị nwere roba pupụtara na m na-eche bụ ndị kasị oru oma version, naịlọn bristles nke ga-enyere anyị aka inweta otu ụdị nsonaazụ. Maka mmezi nke ahịhịa a na ngwa ndị ọzọ n'ozuzu ya, a na-etinye ngwaọrụ zuru ụwa ọnụ na ngwugwu.
Brọsh abụọ dị n'akụkụ na-enyere aka ịduzi nke unyi, ya mere nhicha nhicha dị ntakịrị karịa nke nke ígwè ọrụ ndị ahụ nwere naanị otu. Ọ nwere ngbanwe HEPA dị mfe na ngwugwu ahụ, agbanyeghị, anyị anaghị etinye akụkụ mapụtara ma ọ bụ isi brushes, Anyị ga-enweta ha na isi nke ire ere (anyị amaghị ego nke akụkụ ahụ mapụtara n'oge nyocha).
Ddọrọ ego ahụ dị mfe, Akụkụ azụ nwere obere "bọtịnụ" nke na mgbe a na-eme ya ga-enye anyị ohere iwepu tankị siri ike. Otu ihe a na-eme na nsị ma ọ bụ na-agbanwe HEPA myọ, nke n'ụzọ, nwere oke mma ntupu tupu nyo.
Nchaji isi, obodo kwụụrụ ya na itinye ya n'ọrụ
Banyere isi ụgwọ, ekwesịrị m ịsị na achọtala m ihe izizi ziri ezi. Ntọala a nwere ogo na nhazi, mana uru nke ụdị ndị ọzọ yiri ka echefuru. Ọ nwere usoro nchịkọta USB na ala nke ga-enyere anyị aka itinye njikọ njikọta na-enweghị atụ, nwere uzo abuo abuo ka anyi ghara inwe nsogbu na ichota ebe isi ego, nke a enweghi obi abua maka ihe nkesa na-anwale di na nwunye ndia n'ime otu onwa, bu ihe di nma.
Maka ndị ọzọ, Realme robot na-achọta ebe a na-akwụ ụgwọ, ọ nwere ike ịnwe nsogbu nwayọ na nke mbụ, mana ozugbo ọ dị na map ọ ga-abụ otu achịcha. Mkpokọta odori oge ga-abụ ihe dị ka awa abụọ maka 5.200 mAh nke na-enye anyị nhicha karịa 80 nkeji na nkezi.
Realme Link ngwa (android / iOS) na-echetara anyị Roborock, nke n'aka nke ọzọ, bụ otu n'ime ahịa kachasị mma na ahịa, yabụ na ahụmịhe ahụ dị mma kpamkpam, anyị na-akwado ka ị lee vidiyo anya nke anyị na-egosi gị nhazi nhazi niile site na nzọụkwụ na ọkachasị ị ga-enwe ike ihu ule nke ule dị iche iche.
Ike mmịcha na nhicha ahụmahụ
Anyị nwere ikike kachasị ọkụ nke 3.000 Pa, Otú ọ dị, anyị ga-amata ọdịiche dị n'etiti ụzọ anọ nhicha dị na ngwa ahụ:
Nkịtị: 500 Pa
Nkịtị: 1.200 Pa
Oke: 3.000 Pa
Nhicha kwa ụbọchị ga-ezuru oke na ọnọdụ ahụ Nkịtị, Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị na-achọ nsonaazụ na-adọta uche anyị, anyị ga-ahọrọ usoro ahụ Turbo. Ọnọdụ kachasị ka agafe karịa mkpọtụ, ebe opekata mpe ga-abụ 55 dB.
Ahụmahụ ahụ adịrịrị mma karịa nkewa, nke dị ọsọ ọsọ ma were ihe dị ka nkeji iri anọ maka ala mita iri asaa na abụọ. Ọ na-achọ ma na-enye nsonaazụ nhicha nke dakọtara na ngwaọrụ ndị na-efu narị dollar ole na ole karịa.
Ndakọrịta na Alexa na Google Assistant
LiDAR igodo usoro
M na-akọwapụta ọrụ ndị a nke ngwa ahụ:
Enwere ike ịmachi akụkụ nke maapụ na ụlọ ụfọdụ
Na-akpaghị aka gbanwee mmiri ahụ dabere na ụdị ala achọpụtara
Onwe m, enwebeghị ike ịgbanwe asụsụ na Spanish, n'ihi ya, m ga-eme ya na eziokwu ahụ bụ na onye na-ehichapụ ọkụ na-asụ asụsụ Bekee n'asụsụ Asia.. O juru m anya na ọ dị obere "ihe ịchọ nlezianya" na ihe mgbochi karịa otu nke dị oke ọnụ, Ọ na-abanyekarị n’agbata ụkwụ oche ahụ na ọbụnadị sofas dị elu, ihe nke tụrụ m n’anya nke ukwuu.
Realme TechLife Robot Vacuum na-efu naanị euro 379, ọ bụ ezie na n'oge a, anyị nwere ike zụrụ ya na AliExpress na ụfọdụ onyinye (kpachara anya na omenala) ma ọ bụ weebụsaịtị Realme. Ọnụahịa pụtara ìhè ịdị n'etiti euro 50/100 dị ala karịa ndị ọzọ na-enye nsonaazụ yiri ya.
TechLife Robot agụụ
Ihe na: 30 June nke 2021
Ezigbo mwekota na Realme Link na ọrụ
Ezigbo obodo na nhicha dị mfe
O gosiputaghi n’asụsụ Spanish
Gụnyere ole na ole akụkụ ahụ mapụtara
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Realme TechLife Robot Vacuum, onye na-ehichapụ robot nwere ezigbo mma / ọnụahịa